तपाईको पनि आँखा फरफराउँछ ? त्यसो भए यस्ता छन् भ्रम र यथार्थ - Kathmandu Patra
Home Features तपाईको पनि आँखा फरफराउँछ ? त्यसो भए यस्ता छन् भ्रम र यथार्थ
तपाईको पनि आँखा फरफराउँछ ? त्यसो भए यस्ता छन् भ्रम र यथार्थ
पुरुषको दाहिने र महिलाको देब्रे आँखा फर्फराउनुलाई शुभ मान्ने विश्वास रहँदै आएको छ । तर, ठीक विपरीत भयो भने अशुभ मानिन्छ । तर, विज्ञानले आँखा फर्फराउनुलाई स्वास्थ्य अवस्थासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ । आँखारोग विशेषज्ञ डा. इन्दुप्रसाद ढुंगेल भन्छन्:
आँखामा कुनै प्रकारको चोट या दुखाइ छ भने पनि फर्फराउने समस्या देखिन्छ । आँखालाई बढी दबाब हुने गरी काम गर्दा पनि यस्तो समस्या निम्तिएको पाइन्छ ।
कहिलेकाहीँ आँखाको ढकनीभित्र परेला टाँसिएको अथवा आँखाभित्र परेला घुसेको छ भने पनि आँखा फर्फराउन सक्छ ।
Previous articleज्ञान आर्जन गर्न पढेर मात्र हुँदैन, शास्त्र भन्छ अध्ययन गर्ने कक्ष यस्तो हुनुपर्छ
Next articleभरतपुर अस्पतालमा उपचाररत कोरोना सङ्क्रमितकाे मृत्यु